Ngaphambi kokuba ufumane naziphi na izimvo zokuba ndingumntu okhohlakeleyo, okhohlakeleyo, andinayo intombi. Ubuncinci ayinguye umntu, ophilayo, ophefumlayo. Ndihlekisa nabantu ngegama lam lentombazana IMacbookpro. Mva nje, intombi yam ebendithandana nayo ibiyi ubushushu omncinci, engavuki xa ndifuna yena kwaye angonwabi ade abande. Wow… undikhumbuza xa ndandinayo yokwenene!
UGoogle undithumela ngaphezulu kwamaxesha ama-4 abatyeleli kwindawo yam kunawo nawuphi na omnye umthombo. Amaxesha ama-4! Wowu. Into ekufuneka ndiyenzile ukugcina obu budlelwane buhamba ngendlela eyiyo kukumnaka, ndinxibe ngendlela emtsalayo, ndimamele izinto azithethayo, ndinxibelelane kakuhle naye. Kuthatha ixesha, kodwa ndiyaqala ukuqonda ukuba uthanda ntoni. Ngoku… andingoyena mfana mhle… andiyiyo UGoogle-ubethwe okanye nantoni na, ndiyamthanda.
Ngoku, uyazi ukuba xa uxoka kwintombi yakho, kwaye kuya kufuneka uqhubeke uxoke ubuxoki obunye kwakhona? Kodwa awuxeleli mntu ngobuxoki… bubuxoki nje phakathi kwakho naye. Ndifuna ukubonisa ubungqina bokuba ngamanye amaxesha amantombazana ayathanda xa uxoka. (Inokwaziwa njenge umkhwa omnyama).